Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဆန္ဒ နဲ့ အလှူ
Writer Sein Lyan Time 5:01 pm
PS ဦးရှင်ကြီးကို အကုန်မဖြိုပါနဲ့ဦးလို့။
ရက်စ် ရက်စ် ရက်စ်
ဘလော့ဂ်ဂါသူ ဘလော့ဂ်ဂါသားများ သဒ္ဒါတတ်အား နည်းများမဆို လှူနိုင်ပါစေ တန်းနိုင်ပါစေ...
နှောင်နောင်များမှာလဲ ဒီညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ရေစက်ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေ....း)
ကောင်းလိုက်တဲ့ အစီအစဉ်ဗျာ.. သာဓု သာဓု သာဓု။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ ၃ယောက်လှနေတယ်။ ကိုယ့်မျက်စိထဲ ချောတယ်ထင်တဲ့သူ ၃ယောက်ရှိတယ်။ (ကိုဖိုးစိန်မပါ)
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ မောင်နှမတွေအားလုံး
ဦးရှင်ဂျီး မဖြိုခင် ကျနော် ဗိုက်ထဲ သွန်လို့ ကုန်ပြီ။ မပူနဲ့တော့။
25ရက်နေ့မှာ အလှူပါဝင်ဆင်နွှဲလိုသူများ အကြောင်းကြားပါဗျို့......
20 ရက်နေ့မတိုင်ခင် လွှဲလိုက်မယ်နော်။ အကိုပျော်တယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ပိတိဖြစ်ရပါတယ်။
7 December 2009 at 02:41
Pls count me in. :-)
နာတယ်ကွာ.. စပါတာကတ်လည်း အိရဘူး..
ဥဘိုဘိုကလည်း အကုန် ဟိုဒင်းလိုက်တယ်..
ဖိုးသင်္ကြတောင် မမီလိုက်ဘူး.. အဟင့်(((ဗျစ်စ်))
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါဗျာ..
သဒ္ဒါတရား နည်းများမဆို ပါဝင်လှူတမ်းရမှာပေါ့.. ဒါက ရေစက်လေ.. အရင်ကလည်း ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ ခုလိုပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရတာ..
ဒါပေမယ့် လှူခဲ့တာ နည်းလို့လားမသိဘူး
စပါတာကတ်ရော ဟိုးဒါရော လွတ်သွားတယ်
((((ဗျစ်)))) ((ဗျစ်စ်စ်))..း-)
အစီအစဉ်ကောင်းလေး အတွက် ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်.. ။ 20 ရက်နေ့မတိုင်ခင် ငွေ လွှဲလိုက်ပါ့မယ်...။
ဒီလိုကြုံတုန်းလေးစုပေါင်းပြီးအလှူလောက်ရတာလောက်... ကြည်နူးပီတိဖြစ်စရာမရှိဘူး... တွေးကြည့်လိုက်ရင်..ဟိုးရှေးရှေးဘ၀ကရေစက်တွေပါလာလို့...အခုတနယ်ခြားတွေကနေပြီးလာရောက်ဆုံတွေ့..ပျော်ပါးနိုင်တာလေ.... ရှေ့ဆက်ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးရေစက်ထပ်ဆုံအောင်...၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်ဗျာ....ကိုဖိုးစိန်ကြီးလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ပါစေနော...
7 December 2009 at 05:28
အားကျတယ်ဗျာ .. သာဓုလို့ခေါ်တာထက် .. စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးခြင်းက အတိုင်းအဆမရှိဖြစ်တည်တယ်။ ဒါဟာလဲ ကုသိုလ်ပဲမို့လား..။ =)
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက်ရပါတယ် အစ်ကိုဖိုးစိန်ရေ ဆက်လက် ပျော်ရွှင်ပါစေ မောင်နှမတွေ အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ
ကြယ်ပြာလဲ အလှုထဲပါမယ်ဗျိုး ...... ၂၀ ရက်နေ့အမှီငွေလွှဲပါမယ် ....
တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်
ခု အလုပ်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံစုနေပါတယ်...
အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ အလှူလေးမှာ ပါဝင်ချင်ပါတယ်...
ကိုဖိုးစိန်...း(.. မနာလိုဘူးနော်.. ပျော်မနေနဲ့...း)
8 December 2009 at 02:46
နံပါတ် ၁၂ ...
ကိုဆောင်းချမ်းမိုးးး ပါ ..
ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး စာရိုက်မှား သွားလဲ သိဘူးး ..
မှားတွားတယ် ... ဆောတီးးး
ဖိုးစိန်ရေ..ပိုက်ဆံလွှဲလိုက်ပြီ။ ၂၅ရက်နေ့မှာ အစ်မသူငယ်ချင်းအလှူနဲ့ တိုက်နေလို့ လာနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဖိုးစိန်ရဲ့ဆန္ဒကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရလို့ ၀မ်းမြောက်ရပါတယ်။ :)
အမရေ အလှူတိုက်လဲ အချိန်ကိုကြည့်ပေးပါအုံး။
ဒီမောင်နှမတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် ပါဝင်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။
အလှူနှစ်ခုလုံး လာနိုင်အောင် ကြိုစားပေးပါ အမရေ။
ရီနိုရေ...အစ်မကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။ အာမတော့ မခံရဲဘူး။ အစ်မသူငယ်ချင်းအလှူက စားရုံမဟုတ်ဘဲ အစအဆုံးကူညီပေးရမှာ ဖြစ်နေလို့။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ တက်နိုင်ရင်တော့ လာခဲ့ပါနော်.
မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမကျွမ်းလို့ ခုလိုဖြစ်သွားရတာပါ။